Iray amin'ireo mpanamboatra tsara indrindra ny kalitaon'ny aluminium iraisam-pirenena izay ampiasaina amin'ny indostria isan-karazany. Ireo faribolana ireo dia mandalo amin'ny fenitra fisedrana henjana mba hahazoana vokatra tsara indrindra.
Aluminium Circle dia ampiasaina betsaka amin'ny electronics, kosmetika, fanafody, kolontsaina ary ny fampianarana ary ny ampahan'ny fiara. Electrical appliances, isolation, machinery fabrication, automobile, aerospace, military, mold, construction, printing and other industries. Toy ny fitaovana fanatanjahan-tena toy ny tsy fisian'ny fonon-kitapo, fitaovana famokarana fitaovam-pandehanana ary fitaovana hafa fiasana toy ny shade, shell heater, etc.
Fanamafisana ny harafesina
Alim-borona ho an'ny fitaovana
Ny aliminy dia somary mena ary hosoloina sy hikoropaka alohan'ny hahafantaranao azy, amin'ny harona vy na fitaovana vy. Na ny alimainty misy alika aza dia hikapoka na hikapoka raha toa ka manaparitaka izany amin'ny toerana hafa mafy ianao. Ny alimina maitso dia ho voafehy amin'ny fotoana, izay mety ho olana raha manana cooktop flat. Mba hisorohana an'izany, miezaha mividy alimisy (3mm +) matevina amin'ny alàlan'ny fanoratana an-tsehatra na hena vita amin'ny vy tsy misy rongony na ambany. Aza misalasala koa ny setroka avoakan'ny mpangalatra toy ny fanosehana rano mangatsiaka amin'ny alim-bary misy alim-bary, satria fomba tsara handaminana ny fantsomanao izany.
Ny aliminy dia tsy mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny cookie induction. Misy toeram-pisakafoanana indrin-javatra vitsivitsy sy lafo vidy izay (tsy mahomby) hiasa amin'ny alimo sy varahina.
Tsy ilaina ny mihinana alim-bolokodina na aluminium matevina.
Noho ny fampiharana goavana ataon'ny Aluminium Circle, dia manamboatra azy ireo amin'ny alalan'ny aluminium avo lenta. Ireo faribolana ireo dia tena matanjaka ary afaka amin'ny diam-pandrefesana samihafa araka izay takian'ny mpanjifa. Mamay azy ireo amin'ny fonosana mety tsy hampisy fahasimbana amin'ny vokatra mandritra ny fiterahana. Ny mpanjifantsika dia afaka mampiasa ireny vokatra ireny amin'ny ankapobeny ary tsy voatery miandry, satria azontsika atolotra azy ireo avy hatrany.
Famoronana anarana Alitara Alatsinainy
Aluminium Circle Thickness 0.40mm-5.5mm
Aluminium Circle Diameter 100mm-1280mm
Aluminium Circle Temper H12, H14, H16, H18, H24, H26, O ary ny hafa araka izay takiana
Aluminum Circle Surface Mill finiavana
Aluminum Circle Packing Hanondrana pallets ho an'ny standard (araka ny fitakiana)
Aluminium Circle Payment Terms T / T Western Union L / C
Aluminium Circle Delivery Time 25 andro aorian'ny nahazoan'ny tahiry L / C na 30%
Aluminum Circle Minimum Order Quanlity 5 taonina
Aluminium Circle Fampiharana fitaovana, lakozia, fitaovam-pandevona, sora-baventy, lampshade, tontonana
3003 h14 kofehy aliminioma, 3mm Thickness Diagonal Aluminium, Alim-borona manodidina 3003, Kitapo fidiovana aluminium